Mpitondra hafatra & tetika | Fiaretana haran-dranomasina
Dingana 5: Fantaro ireo mpitsikilo sy mpihazakazaka mba hifampiresahana amin'ny hafatrao
Rehefa fantatrao ny tanjona, ny mpihaino ary ny hafatra fototra, ny dingana manaraka dia ny mamantatra ny fomba hanolorana ny hafatrao amin'ny mpihaino anao.
Jereo ny famelabelarana fohy momba ny famantarana ny mpitondra hafatra sy ny tetika:
Ao Maui, Hawai'i, ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaoWest Maui Kumuwai Ny fampielezan-kevitra dia nanasongadina ireo mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina izay efa mandray anjara amin'ny fandotoana fandotoana izay mampihena ny fitondràna fanentanana faniriana hanentanana.
Izay manafaka ny hafatrao dia zava-dehibe toy ny safidinao holazaina. Ny hafatra tsara omen'ny mpitondra hafatra iray dia azo inoana fa ho ren'ny mpijery anao; Ny mifanohitra amin'izany koa dia marina. Mba hahafantarana ny mpitondra hafatra mahomby dia diniho hoe iza no manaja ny mpihaino na miandrandra azy ary iza no hihaino azy ireo. Avy eo dia fantaro raha manana fifandraisana amin'ny olona / olona ianao ary raha vonona ny hizara ny hafatrao amin'ny mpihaino anao izy ireo. Mety mila fampaherezana sy fampiharana ny mpitondra hafatra mety hampiadana sy hahomby amin'ny famoahana ny hafatrao.
Ohatra avy amin'ny olona afaka ny ho iraka tsara:
Ireo mpitarika eo amin'ny fiarahamonina toy ny mpitarika fiangonana na mpikaroka ara-kolontsaina
Namana sy fianakaviana
Ireo olo-malaza toy ny mozika eo an-toerana na radio na fahitalavitra
Ny mpiasa, mpiara-miasa, mpiara-miasa
Olona iray efa mandray anjara amin'ny hetsika / hetsika tianao hampiroboroboana
Ireo namana izay ao - na hifandray - ny mpihaino
Ny fampielezan-kevitr'i Laolao ao amin'ny Commonwealth ao amin'ny Nosy Marianas Avaratra dia nanao mpitarika vondrom-bahoakam-panajana izay naneho ny vondrona sosialy samihafa ho iraka ho an'ny sehatra fiarovan-tenany (click to enlarge).
Avereno jerena ny Worksheet mpihaino anao mba hahafantarana raha mety ho mpitondra hafatra tsara ny iray amin'ireo mpifindra monina ao.
Ny anjaranao (> atoro anao 15 minitra)
manokatra fisie PDF Ampiasao ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaoAsamanokatra fisie PDF Ho an'ny mpampianatra sy ny lisitra ireo olona izay eritreretinao fa hifandray tsara amin'ny mpihaino anao (s), dia manorata amin'ny fomba ahoana ary amin'ny fomba ahoana no hahatsapan'ireo iraka ireo sy / na hampifandray azy ireo.
Mametraka fanontaniana amin'ny fisafidianana iraka:
Iza no mahatoky ny mpihaino anao?
Iza no tadiaviny rehefa mamorona hevitra?
Manana ny eritreritr'izy ireo ve ianao?
Raha miresaka momba ny toerana iray manokana ianao, nahatonga azy ireo ho lehibe, hiaina, na hanana fifandraisana manokana amin'ny faritra?
Moa ve ny olona manana fahalianana manokana, fahalalana ary / na traikefa ao anatin'ilay olana, izany hoe azo itokisana momba ilay foto-kevitra?
Moa ve izy ireo mitondra feo marina izay ho tsapan'ny olona dia tso-po?
Moa ve izy ireo hanamboatra ny fihetsika tianao hijerena?
Zava-dehibe ve ny manana olona manana fitoviana amin'ny taona, ny lahy sy ny vavy, ny hazakazaka, sns ...?
Manana risika na adihevitra mety horaisina ve io mpitondra hafatra io?
Paco Lopez, mpanakanto mpamorona sary ary mpikambana ao amin'ny Birao ao amin'ny Arrecify Pro Ciudad Inc., Puerto Rico, dia namorona boky fandokoana fampahalalana ho an'ny ankizy hianarana momba ny fiainana an-dranomasina eo an-toerana. Mampiasa zavakanto koa izy mba hialana amin'ny fahalotoana amin'ny haran-dranomasina. misokatra amin'ny varavarankely vaovaoHamantatra bebe kokoa.
Ny ezaka tsara indrindra amin'ny fifandraisana dia mampiasa ny tetika mivantana indrindra. Manomboha amin'ny fianarana ny fampahalalana ny mpihaino anao ary mifidiana tetikady izay mahatratra azy mivantana araka izay tratra. Ohatra, raha miezaka manatratra antokon'olona mpanjono zokiolona tsy mampiasa Internet ianao, dia tsy afaka manatona azy ireo ny fampielezan-kevitra sosialy. Ny tetikady tsara kosa dia mety hanatrika azy any amin'ny dock rehefa avy manao fanjonoana hiresaka, na mametraka lahatsoratra na dokam-barotra amin'ny famoahana ao an-toerana izay mamaky am-pahibemaso. Zava-dehibe ny mifantina tetika isan-karazany mba hizarana imbetsaka ny mpihaino anao sy any amin'ny toerana maro - ny famerimberenana dia manampy amin'ny famakivakiana ny korontana. Amin'ny ankapobeny, ny fotoana fandefasana hafatra dia mety ho azo inoana izany; na dia manan-danja ihany koa aza ny manome antoka fa tsy mihoatra ny-mizara ny hafatrao ianao ary miteraka herim-po.
Zavatra hafa mba hodinihina:
Manaraka ny mpihaino anao ve ny tanjonao amin'ny fomba iray mampiseho ny soatoavina ifampizaranao?
Moa ve ny tetika ampiasainao mampita ny zavatra tianao hataon'izy ireo ("ny antso ho amin'ny asa")?
Ny tetika ampiasain'ny mpampakatra dia mety hahafinaritra! Tadidio fa ny teti-bola, ny staff, ary ny toe-javatra dia mety hisy fiantraikany amin'ny tetika azonao ampiharina. Eritrereto ireto fanontaniana ireto mba hamaritana hoe inona ny tetika mety aminao:
Azonao aloa ve izany?
Afaka manohana azy ve ianao?
Afaka manova taktika ve ianao raha mila izany?
Hevitra ho an'ny mpihaino ho an'ny mpihaino
Ny tabilao etsy ambany dia manome ohatra avo lenta amin'ny tetikady mahomby amin'ny fifandraisana ho an'ny mpihaino maro sy toro-hevitra momba ny fampiharana mahomby. Ity dia hanome anao ny fanandramanao ireo karazana tetika mety mety ho an'ny mpihaino anao. Ny fifanakalozan-kevitra dia mety ahitana tafatafa, fampahafantarana amin'ny fomba ofisialy na amin'ny informatika, ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety, tranokala, haino aman-jery sosialy, gazetiboky, taratasy, antso an-tariby, dokam-barotra voavidim-bola, hetsika fiarahamonina, fitsangatsanganana, mascots, ary bebe kokoa.
Ireo mpandray anjara hafa
Sary avy amin'ny bilaogin'ny bilaogy West Coast Governors Alliance momba ny Ocean Health.
Ohatra: Governora, talen'ny masoivohon'ny jono
Ohatra kendrena: Amin'ny taona 2010, alao ny talen'ny jono mba hampiakatra 40% ny tetibola amin'ny fitantanana ny haran-dranomasina.
Fivoriana manoloana ny tarehiny
Mpikambana ho iraka
Famoahana bokikely manasongadina ny tombontsoa amin'ny fitomboan'ny tetibola ho an'ny fitantanana ny vatohara
Omeo aloha ny fampahalalana
Hetsika sy vahaolana ankehitriny
Sary © Sean Marrs / TNC
Ohatra: fiaraha-miasa amin'ny jono, birao manodidina
Karazana tanjona: Amin'ny taona 2018 dia misy kaoperativa jono roa mampiasa sy mampiroborobo ny fampiasana fomba fanjonoana maharitra.
Skits na play
Mpikambana ao amin'ny fiarahamonina (mpiara-miasa) ary mpitarika manana andraikitra ho iraka
Misafidiana fomba amam-panao mifanaraka amin'ny kolontsaina
Ohatra: mpandraharaha mpivarotra antsitrika na mpizahatany mitsoraka
Tanjona: Amin'ny 2020, ny toeram-pivarotana any an-toerana rehetra dia manatanteraka fomba fanao mahazatra, toy ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaoGreen Fins.
Radio / TV / gazety
Ny fivarotana ny fivarotam-bokatra dia manaparitaka hafatra ho an'ny fivarotana hafa
Manapaha hevitra amin'ny fomba tena mandaitra mahomby mba hahatongavana amin'ny olona marobe
Ampiasao ny fikambanan'ny mpivarotra na fiarahamonina
Ohatra: Mpanonta any amin'ny taratasy iray eo an-toerana, mpampiantrano radio
Tanjona: alohan'ny hanombohan'ny fivoriana ara-dalàna, ny mpanoratra sy ny mpiasan'ny gazety lehibe dia mahatakatra ny sandan'ny haran-dranomasina ary vonona ny hanoratra tantara manandratra ny fanatsarana ny fahasalaman'ny vatohara.
Fivoriana manoloana ny tarehiny, fanadihadiana
Mpanao gazety mpanao gazety
Fitsangatsanganana / fitsidihana toerana
Mampiasà tantara mahomby mba hanentanana ny fiovana tsara
Ohatra: Fikambanana mpiara-miasa
Tanjona: amin'ny 2018, mandamina ny fifandraisana iraisam-pirenena amin'ireo fikambanana mpiara-miasa miasa mba hanohanana ny fampivelarana ny tambajotram-piarovana an-dranomasina, ary ahazoana antoka fa vonona ny hizara hafatra lehibe ireo mpiasa rehetra.
Manonta fitaovana toy ny taratasy na bokikely
Ampiasao ny Birao Message mba hampivelarana ny hafatra ifampizarana ho an'ny tsy fitoviana
Kitiho ny Banky Idea raha te hahazo aingam-panahy ianao na jereo ny NOAA's misokatra amin'ny varavarankely vaovaoMiresaha amin'ny fahombiazanamanokatra fisie PDF bokikely ho an'ny torolàlana momba ny haino aman-jery, hetsika, fampirantiana, horonan-tsary, podcast, servisy amin'ny lisitra, fifandraisana an-tserasera, ary akora fanontana, ao anatin'izany ny bokikely, ny takelaka ary ny afisy. Ny Idea Bank etsy ambany dia novolavolaina miaraka misokatra amin'ny varavarankely vaovao .
Mitandrema amin'ny fanaovan-tsonia Guerilla, tetika fifandraisana izay mampiasa fomba haingana, fomba famoronana, matetika mifampiankina amin'ny fahatsapana vazivazy, mba hisarihana ny sain'ny mpanatrika ary hampiato azy ireo haingana. Ohatra amin'izany ny fametrahana fitaovam-pahaizana any amin'ny toerana ho an'ny besinimaro, ny stencils amin'ny sisin-dàlana, ary ny tselatra flash, toy ny iray ny fanentanana 4FJ natao mba hanentanana ny fanentanana momba ny fihenan'ny isan'ny trondro ary hangataka ny mpitsidika tsy hihinana vovobony mandritra ny volana maivana.
Sary © West Maui Kumuwai
Ohatra iray hafa avy any Maui, Hawai'i dia fifaninanana fihinana ahidrano ny fampielezan-kevitra any West Maui Kumuwai mba hisintonana ny saina amin'ny anjara asan'ny parrotfish, sy ny biby mihinana ahidrano hafa, mba hitandrina ny haran-dranomasina. Nahasarika mpijery vaovao ny hetsika ary nametraka ny fanentanana tamin'ny pejy voalohan'ny gazety teo an-toerana.
Tantarao ny tantaran'i Kathy Jetnil-Kijiner, poety tanora manan-talenta avy amin'ny nosy Marshall, raha nanoratra sy nanatanteraka ny tononkalo " misokatra amin'ny varavarankely vaovaoDear Matafele Peinem". Ny tononkalon'i Jetnil-Kijiner momba ny fiovan'ny toetr'andro sy ny fandrahonana ateraky ny firenena marin-pototra ao amin'ny Nosy Pasifika dia natao tao amin'ny Vovonan'ny Firenena Mikambana momba ny toetrandro mba hisarihana ny sain'ny media iraisam-pirenena ary hananganana ny fanohanana ny politikam-panalefahana ny fiovan'ny toetrandro. Jereo hoe nanao ahoana izany nalain'ny media.
Ohatra avy amin'ny Sekretariamin'ny Community Community, 2011. Tantara sy Illustrations avy amin'ny Dom Sansom.
Ampianaro amin'ny bokim-piraketam-boky sy ny boky fanangonam-bokatra izay misarika ny sain'ny ankizy sy manandratra azy, mampahatsiahy azy (sy ny ray aman-dreniny) ny fitondrantenany. Ny tantara dia afaka manampy amin'ny fanatsarana ny hevitra manintona ary mamolavola hevitra toy ny fiovan'ny toetr'andro sy manan-danja. Ohatra, The misokatra amin'ny varavarankely vaovaoTantaram-pianakaviana Pou sy Miri dia namboarin'ny Secretariat of the Pacific Community (SPC) sy ny German Overseas Development Agency (GIZ) hanampiana ny ankizy hahatakatra ny antony, ny fiantraikany ary ny vahaolana amin'ny fiovan'ny toetr'andro. Ireo boky ireo dia manamafy ny fiovan'ny fitondran-tena amin'ny fampifandraisana ny foto-kevitra tsy azo ovaina amin'ny fiovan'ny toetrandro amin'ny hetsika marina azo tsapain-tanana isan'andro. Ireo boky ireo dia mihetsika ho famporisihana na fampahatsiahivana ihany koa ny amin'ny fananganana ny fitondran-tena. Ny fanatrarana ny ankizy amin'ny sehatry ny fiainana manan-kery amin'ny alàlan'ny haino aman-jery fifandraisana, dia mampitombo ny mety hahatsiarovany ireo hevitra sy hafatra efa ela taorian'ny nifaranan'ny fampielezan-kevitrao.
Resource: misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFamoahana tantara tena tsara, Andy Goodman
Sary © WashedAshore.org
Azonao atao ny mampiasa zavakanto hampianarana ny olona momba ny olanao sy ny vahaolana. Tokony ho amin'ny habaka imasom-bahoaka hita maso io mba ahafahana manara-dalàna ny fihetsika tadiavina ary mampahatsiahy ny olona handray izany. Tsara indrindra, asao ny vondron'olona hanampy amin'ny famoronana azy! Ohatra: Priscilla the Parrot Fish dia sary sokitra 16 metatra lava vita amin'ny potipotika an-dranomasina nataon'ny fikambanana fiarovana i Washed Ashore. Priscilla dia naseho tao amin'ny valan-javaboary Sea World mba hampahafantarana ny olan'ny fandotoana an-dranomasina. Ny fizarana hafatra sy ny fihetsika mitaona amin'ny alàlan'ny fampahatsiahivana hita dia mety hanampy bebe kokoa aza raha ampidirina amin'ny zavatra ampiasaina matetika, toy ny takelaka, penina, andriamby frizidera, fonosana jiro, siô, sns.
Sary hosodoko miloko an-kalamanjana, toy ity iray ity ao anaty toeram-pilalaovana rano ( misokatra amin'ny varavarankely vaovaofisorohana ny rano), dia afaka manosika, manentana fanahy, na mampahatsiahy ny olona handray fepetra manokana. Sary © Margaret Thornberry
Ohatra, ny kalandrie, noforonin'ny Palau International Coral Reef Center, dia fampahatsiahivana maharitra ho an'ny olona ao Palau ny amin'ny anjara toeran'ny trondro ahitra amin'ny vatohara.
Ohatra iray hafa ity takelaka fandokoana ataon'ny ankizy ity izay manana fampahalalana lehibe momba ny asan'ny vondrom-piarahamonina hitantanana ny jono.
Asa fampivoarana notontosain'ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaoKīpahulu Ohana, vondron'ny vondrom-piarahamonina miasa mba hamelomana ny fomba nentim-paharazana sy ny fitantanana ny harena an-dranomasina any Maui, Hawaii.
Loharano manampy anao handrindra ny sary mihetsika: misokatra amin'ny varavarankely vaovaoSary sary avy amin'ny fiaraha-monina: Tari-dàlana fanamorana ny fanentanana ny hetsika eo amin'ny tontolo iainanamanokatra fisie PDF , misokatra amin'ny varavarankely vaovaoAhoana ny fomba hananganana sary hosodokomanokatra fisie PDF
Ampiasao ny hira manintona mba hampahafantarana ny olanao. Ohatra, ny "Bahamas"Conch Gone"Nampiakatra ny fahatsiarovan-tenan'ny firenena ny fihenan'ny isan'ny mponina any Congchservation amin'ny fampielezan-kevitra Conchservation. Ny fanentanana dia nangataka ny Bahamiana mba hahazoana antoka fa ny conch dia lanjany iray mialohan'ny hisambotra azy mba hahazoana antoka fa misy ny angona amin'ny ho avy.
Ny Coral Song noforonin'i AJ Jenkins, horonan-tsarin'ny KidsTV123, dia hira mahafinaritra ho an'ny ankizy momba ny haran-dranomasina, nahoana izy ireo no zava-dehibe, ary inona no ataon'ny hetsika ataon'ny ankizy mba hanampiana azy ireo ho salama.
Ireo mpandray anjara ao Palau dia milalao ny "What the Catch" hianarana momba ny fitantanana jono. Sary © misokatra amin'ny varavarankely vaovaoRare
Ampandraiso anjara amin'ireo mpandray anjara - toa ny mpanjono, tompon'andraikitra amin'ny governemanta ary ny tanora - amin'ny fifanakalozan-kevitra sy fampisehoana momba ny lohahevitra / tetikasanao amin'ny alàlan'ny fanaovana tanana sy fifandraisana. Tafiditra ao anatin'izany ny filalaovana lalao, ny fanoratana azy ireo ho mpahay siansa olom-pirenena, na ny fitsidihana fitsangatsanganana an-tsaha mba hahafahan'izy ireo "mahita ny tenany manokana." Ohatra, "What the Catch?" dia lalao fifaneraserana izay ahafahan'ny mpilalao miaina ny fisondrotan'ny jono sy ny fitantanana jono. Amin'ny alàlan'ny fitantanana ny jono hazandrano volamena misy rambony dia fantatry ny mpilalao avy hatrany ny tsy fahombiazan'ny fitantanana jono mahazatra sy ny tombotsoan'ny fitantanana fizarana trondro. fitaovana lehibe hanamorana ny fifanakalozan-kevitra amin'ireo vondrom-piarahamonina liana amin'ny fanatsarana ny fitantanana jono.
Ireo mpandray anjara dia afaka mivantana mivantana amin'ny fanangonana ny vaovao hampahafantarana ny fanapahan-kevitry ny fitantanana. Azonao atao, ohatra, ny fiaraha-monina misy anao amin'ny fandinihana, ny fandrefesana, ary ny fandinihana ny fiovana eo amin'ny tontolo iainana. Ity dia fomba lehibe ahafahana mivantana ny olona amin'ny olana momba ny fiovan'ny toetrandro, manampy azy ireo hahita fiovana ho an'ny tenany, ary manome hery azy ireo handray andraikitra.
Fitaovana fampifanarahana fiovan'ny toetr'andro Ny mpandray anjara amin'ny fampiofanana dia mianatra ny fomba fizahana ny torapasika any Seychelles. Sary © TNC
Ohatra iray hafa amin'ny siansa zon'olombelona izany Hui O Ka Wai Ola, vondrona mpilatsaka an-tsitrapo mandrefy sy mizara ny satan'ny kalitaon'ny rano ao Maui. Ireo mpahay siansa momba ny natiora voajanahary, miaraka amin'ireo mpiara-miasa hafa, dia manofana mpilatsaka an-tsitrapo amin'ny kaody fanaraha-maso siantifika. Ny fampahalalana izay angonin'izy ireo dia manampy ny State of Hawai'i hameno ny banga ny angon-drakitra mitsikera sy hampivelatra ny paikadim-pitantanana.
Ireo mpikaroka ny olom-pirenena dia nanangona santionan'ny rano tao Maui, Hawaii. Sary © Dana Reed
West Maui Kumuwai mpandray anjara. Sary © West Maui Kumuwai
Angataho ny olona hanome toky ny fanohanany ary hanolo-tena ampahibemaso hanao zavatra ho fomba iray hanentanana ny hafa sy hanampy amin'ny fanarahana (ny olona manao fanoloran-tena ho an'ny besinimaro dia mety handray fanovana). Ohatra, amin'ny alàlan'ny fampielezan-kevitra ao Maui Kumuwai Andrefana, ny mponina ao Maui dia mivoady fa handray fepetra hanakanana ny riaka maloto tsy hahatratra ny ranomasina. Manapa-kevitra ny tompon'andraikitra amin'izay hetsika hataon'izy ireo, mameno ny tabilao fampanofana, ary maka sary izay aseho amin'ny tranokalan'ny fampielezana. Ity fampisehoana fanoloran-tena ampahibemaso ity dia mahatonga ny olona tsirairay handray anjara amin'ilay hetsika tadiavina.
Ny fonosan-tserasera Laolao manohitra ny fako dia mampiseho ny sarin'ny fiarahamonina. Sary © Our Laolao
Tahaka izany ihany koa, ireo olon-tsotra ao Saipan, CNMI, dia miantoka ny tsy hikotrika ho anisan'ny fanentanana atao hoe Laolao Anti-Litter. Ny sarin'ny fiarahabana dia nampidirina amina birao fampiratiana ary naseho nandritra ny hetsika fiarahamonina.
Fomba iray hafa ahafahana maneho ny fanohanan'ny fiarahamonina ny hetsika dia amin'ny alàlan'ny zavakanto ho an'ny besinimaro, toy ny mosaikin'ny sary sokitra manokana miaraka amin'ny fanoloran-tena, sary sokitra iray an-kalamanjana miaraka amin'ny zavaboary an-dranomasina vita printy izay mampiseho fiantohana, na angamba trondro hazandrano manangona manodidina ny harambato teny faneva.
"Trondro fanoloran-tena" dia ampahany amin'ny fametrahana zavakanto mampiseho hetsika tsara ataon'ny olona amin'ny haran-dranomasina.
Ireo fampisehoana manintona ireo dia mety ho fitaovana lehibe ahafahana manangona ny fanoloran-tena manokana ary maneho azy ireo ivelan'ny fiainan'ny fanentanana ataonao. Eritrereto ny habaka maharitra (na semi-permanent) toerana izay ahafahan'ny olona manaiky ny hetsika fihetsika henjana.
Ampiasao ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaoTactics Worksheetmanokatra fisie PDF ho an'ny atidoha sy ny lisitr'izay paikady izay eritreretinao fa hahomby indrindra ho an'ny mpihaino anao (s). Avelao ny tsanganana faharoa amin'ity asa-tsoratra ity ho an'ny fepetra manaraka. Mieritrereta tsara momba ny tetika, fa tadidio ny zava-kendrenao ary aiza ny fomba hahafantarana ny mpihaino anao. Hanombohana amin'ny zavatra mora ary hametraha ny hevitrao amin'ny taratasy. Ny aretin-tsaina izay azonao sy ny mpihaino anao. Aza matahotra ny mieritreritra ivelan'ny boaty ary mamorona!
Mametraka fanontaniana ho an'ny fifidianana tetikady:
Moa ve ny tetika notanisainao tao anatin'ny fahaizan'ny orinasanao?
Hanaraka ny mpihaino anao ve ny tetika tianao hatao?
Ahoana ny fifandraisan'ny olona amin'ny mpihaino anao?
Mamaky vaovao ve ny mpihaino anao sa mijery vaovao amin'ny fahitalavitra na mamoaka vaovao amin'ny media sosialy? Iza amin'ireo fantsona?
Moa ve ity fitaovana / tetika mifandraika amin'ny serasera ity mifanaraka amin'ny lohahevitra, ny adiresy ary ny hafatrao? Moa ve mahatsapa ara-kolontsaina ary mampiseho ny soatoavina ifampizaranao?
Mijery daty sy zava-mitranga ve ny daty? Misy hetsika na fialantsasatra / fitsingerenan'ny andro nahaterahana fa afaka manangana tetika manodidina ianao?
Moa ve ianao mahatsikaritra ny zavatra azonao atao raha omena ny olona sy ny dollars ianao mba hanohanana ny ezaka ataonao?
Misy fomba iray handrefesana ny fahombiazan'ny tetikady tsirairay? Soraty ny fepetra horaisinao mba hanombanana ny paikadinao. Raha toa ianao ka tsy mahavita tetikady, dia mariho izany.
Mandehana any amin'ny Dingana 6: refesio ny vokanao
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoMiresaka momba ny fahombiazana: Manome antoka ny fanomezan-toky ny MPAmanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoBoky torolàlana momba ny fiarovana ny tontolo iainana - Torohevitra hananganana fahatsiarovan-tena ho an'ny daholobe manokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoIdea Bank dia novolavolaina niaraka tamin'ny Rare